‘धनपति’ यूटुयूव रिलिज नगरिने, दिपेन्द्र र खगेन्द्र अमेरिका उडे « Ramailo छ
‘धनपति’ यूटुयूव रिलिज नगरिने, दिपेन्द्र र खगेन्द्र अमेरिका उडे
समय : 1:31 pm
असार २३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘धनपति’ यूटुयूवमा रिलिज नगरिने भएको छ । फिल्म निर्माण कम्पनी टुकी आर्ट्स प्रा. लि.र दीपेन्द्र के खनाल प्रोडक्सनसले प्रेस रिलिज जारी गर्दै धनपति यूटुयूवमा रिलिज नहुने जनाएको हो । किन नगरिने भएको हो त यूटुयूवमा फिल्म रिलिज ?
‘प्राविधिक पक्षको रस लिनका लागि पनि हलमा हेर्नुको मज्जा साना होम थिएटरमा पक्कै छैन । फिल्म प्रदर्शनको माध्यम पनि हल नै भएकोले हामीले ‘धनपती’ लाई युट्युबमा नराख्ने निर्णय गरेका छौं’ जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । दिपेन्द्र के.खनाल निर्देशित फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । दिपेन्द्र र खगेन्द्र प्रिमियरको लागि गत साता अमेरिका उडेका छन् । अमेरिकाको प्रिमियर सकेर उनीहरु नेपालमा बिहिबार हुने प्रिमियरमा उपस्थित हुनेछन् ।
फिल्म ‘धनपति’ मा खगेन्द्रसँगै सुरक्षा पन्त, आशान्त शर्मा, मनिष निरौला, सुरभी बर्तौला, हरिहर शर्मा, रवी गिरी, कमल देवकोटा, प्रकाश घिमिरे आदिको अभिनय रहेको छ । खगेन्द्र आफ्नै लेखन, निर्देशक खनालको छायाँकन रहेको फिल्ममा रोजिना सिटौलाको निर्माण रहेको छ ।